Yakatariswa paMugovera wakanaka masikati kwaireva kurwadziwa uye kufa kwevaAmtrak vafambi muMontana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Rail Kufamba » Yakatariswa paMugovera wakanaka masikati kwaireva kurwadziwa uye kufa kwevaAmtrak vafambi muMontana
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Rail Kufamba • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Nhasi vanhu vanosvika vatatu vakafa, vanopfuura makumi mashanu vakakuvara muchitima cheAmtrak kuMontana mushure mekunge mota ina dzatsikwa.
Chitima cheAmtrak chakananga kuMiami derails padhuze neMobile, Alabama, ichiuraya vanhu makumi manomwe nemanomwe musi waGunyana 47, 22. Tsaona yakaipisisa munhoroondo yaAmtrak, yakakonzerwa neanoregeredza vanofambisa zvikepe nemamiriro emhute.
Vanhu vakati wandei vakafa, 50+ vakakuvara nhasi pane #Amtrak chitima mu # Montana
Chitima chakadzvanyirirwa munzira yayo kubva kuChicago kuenda kuSeattle
Dzinosvika mota ina dzakadonhedzwa pamusoro
Chitima chevapfuuri cheAmtrak chinoshanda pakati peSeattle neChicago chakabviswa Mugovera masikati kuchamhembe-pakati peMontana, sekureva kwenhau dzemuno nemagariro enhau.
Yakanga iri matenga ebhuruu pamusoro peMontana apo vafambi 147 pachitima cheAmtrak vakava vanyajambwa venzara. Vatakuri vanoverengeka vachiri kubatwa.
Chitima chakananga kumadokero kuSeattle, chakadzvanywa pakati peHavre neShelby inomira muMontana.
Iyo chitima yakadzikira makiromita angangoita kubva Joplin, Montana, guta rine vanhu vangangoita mazana maviri.
Chapupu chakaona chakatumira dzinosvika ina mota dzakatsikwa pamusoro uye panzira. Kutanga vapindura vari panzvimbo.
Panguva ino kufa kwevanhu vatatu kunonzi uye kukuvara kwakawanda.
Tsaona huru yekupedzisira yeAmtrak yechitima yakanyorwa muna Kukadzi 4, 2018, muCasey, South Caroline, apo chitima chakabonderana nechakamira CSX chitima chekutakura.
Nyanzvi dzekuchengetedza dzinokurudzirawo kusarudza chigaro chakatarisana neshure pakukwira chitima. Izvi zvinodaro nekuti munhu akagara ipapo kashoma kukandwa kumberi panguva yekurovera. Zvitima zvinowanzo rova ​​chimwe chinhu padivi-pane kupfuura musoro-kana kana kumashure.